I-Hardware Progressive Tool, Metal Stamping Die, Ithuluzi le-Sunroof - I-LangO Mold
I-Kunshan JS Mold Co., Ltd
I-Kunshan JS Mold ingumenzi wesikhunta womjovo wepulasitiki wezinga eliphezulu osebenza ngokukhethekile ekwenzeni isikhunta nokubumba nokuhlanganisa amayunithi aqediwe. Sisebenza ngokukhethekile ngomklami onembayo nomkhiqizi iminyaka engu-15, nethimba labaklami abanolwazi nethimba lonjiniyela abachwepheshile, elinekhwalithi enhle kanye nenani elihle lokuncintisana.
Njengenkampani eqinisekisiwe ye-ISO9001:2015, i-Kunshan JS Mold inochungechunge lwedizayini edidiyelwe yokubumba, ukukhiqiza, kanye nezinga lokuhlola, elifanele izidingo zase-Japan, e-USA, eYurophu nakwamanye amazwe, kuwumsebenzi wethu ukuletha isikhunta esihle kakhulu nesibunjiweyo. izingxenye emakethe ngezinhlelo zokulawula eziqinile.
Isixazululo sepulasitiki esigcwele isitobhi esisodwa: Idizayini nokuthuthukiswa, ibhilidi lamathuluzi, ubunjiniyela, ukubumba umjovo, i-Assembly & Packaging. Ithimba lethu elichwepheshile nelisabelayo labaxazululi bezinkinga ezingapheli lingalalela izidingo zakho isikhathi esigcwele, lokhu kungaba yingxenye ebalulekile yesistimu yethu yesevisi.
I-LangO iyiNkampani yamathuluzi esebenza ngokusemthethweni kuzo zonke izinhlobo zamathuluzi ensimbi kanye nezingxenye zokugxiviza zensimbi, imikhiqizo yethu ehileleke kakhulu ekukhiqizeni amathuluzi ensimbi nasekukhiqizeni izingxenye zokugxiviza zensimbi.